Somaliland: Wacdarihii Laascaanod Iyo Xisbiga Ucid Iyo Musharax Ku Xigeen Oo Kale Qayb Galay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wacdarihii Laascaanod Iyo Xisbiga Ucid Iyo Musharax Ku Xigeen Oo Kale...
Somaliland: Wacdarihii Laascaanod Iyo Xisbiga Ucid Iyo Musharax Ku Xigeen Oo Kale Qayb Galay
Xisbiga mucaaradka ah ee Caddaalada iyo Daryeelka (UCID), ayaa shalay maalintiisii lixaad ee ololaha doorashada madaxtooyada ka dhigay isu-soo-baxyo waaweyn qaar ka mid ah magaalooyinka Somaliland.Murrashaxa madaxweynaha ahna guddoomiyaha xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, oo uu wehelinayay murrashaxiisa madaxweyne ku-xigeenka Prof. Axmed Xasan Abyan, ayaa shalay safar la xidhiidha ololaha doorashada ku soo maray magaalada Laascaanood iyo degaamo ka tirsan gobolka Sool.
Eng. Faysal Cali Waraabe, iyo Murrashaxa madaxweyne ku-xigeenka ayaa si ballaadhan loogu soo dhaweeyay degaannada Oog, Guumays Yagoori, Adhi-Cadeeye iyo tuullo Sama-kaab, iyadoo markii danbena ay uga sii gudbeen dhinaca magaalada Laascaanood, iyadoo murrashaxiinta UCID lagu qaabilay soo dhaweyn la yaab leh.
Boqolaal dadweyne ahaa oo isugu jiray madax dhaqameed, aqoon yahano, odayaal, waxgarad, haween iyo dhalinyarro ayaa si aan kala hadh lahayn ugu soo dhaweeyeen magaaladda Laascaanood, kuwaaso ruxayay calanka xisbiga UCID iyo caleemo qoyan, isla markaana ku dhawaaqayay erayo iyo hal-ku-dhegyo ay ku muujinayeen taageeradda ay u hayaan xisbiga UCID.
Faysal Cali Waraabe, oo la hadlayay taageereyaashii faraha badnaa ee ku soo dhaweeyay Laascaanood ayaa ugu horayn uga mahad celiyay soo dhaweyntooda, isagoona tilmaamay in uu ka khibrad iyo waayo aragnimo hogaamineedba badan yahay labadda musharax ee Kulmiye iyo Waddani. “Anigu waxaan ka soo jeedaa reer talin jiray. Aabahayna wuu talin jiray, awoowgay-na wuu talin jiray, waxaan ahay nin u dhisan in uu wax hogaamiyo. C/raxmaan Cirro iyo Muuse Biixi in aan hoos tago waa igu ceeb, oo agtayda waxba kama aha.
Waxaan ahay ninkii u horeeyay ee damcay in uu Cigaal la tartamo oo uu isla soo sharaxo ee xisbiga samaystay, xiligaa Muuse iyo Cirro xisbiyo may lahayn. Waxaan ahay nin Rayaale la tartamay, waxaan ahay ninkii Siilaanyo la tartamay ee isla sharaxay. Labada-na (Cirro iyo Muuse), gidaaradda ayay ka soo kaceen, ee weligood ismay odhan madax noqda” ayuu yidhi Murrashaxa madaxweynaha UCID.
Wuxuu sheegay in labada xisbi ee Waddani iyo Kulmiye ay doonayaan in shacbiga ay codkoodda ka iibsadaan maadaama oo ay UCID ka lacag badan yihiin, balse xisbigiisa UCID uu bulshadda u hayo qorsheyaal wax lagaga qabanayo mustaqbalkoodda. Waxaanu yidhi “Waa run oo labadda xisbi ee kale way iga lacag badan yihiin, oo waxay doonayaan in ay idin iibsadanayaan, laakiin, anigu mustaqbal ayaan idiin hayaa. Wasiirrada Waddani ku jiraa waa kuwii riday dagaalkii Kalshaale, ee iyagoon dawladda la tashan iska weeraray Buuhoodle, oo Buuhoodle ay noqotay godka Somaliland laga dilayo, cadhadii ay berigaa qaadeen darteed”.
Geesta kale Murrashaxa jagadda madaxweyne ku-xigeenka UCID Prof. Axmed Xasan Abyan, oo meel fagaare ah hadal uga jeediyay boqolaal ka mid ahaa taageereyaashii ku soo dhaweeyay Laascaanood ayaa sheegay in haddii xisbigoodu uu talada waddanka ku guulaysto in ay ka shaqaynayaan sidii dhaqaalaha, horumarka iyo siyaasadda dalka la isugu dheeli tiri lahaa, waxaannu yidhi “Xisbiga UCID, waa xisbiga caddaalada iyo daryeelka. Waa xisbiga dadka danyarta ah, waa xisbiga dhallinyarada, waa xisbiga dadka la ilaaway ee xuquuqdooda lagu tuntay. Haddii aanu ku guulaysano kursiga madaxtinimadda oo aad codkiina na siisaa, waxaanu ku dedaalaynaa waddanku in uu isku dheeli tirnaado. Horumarka ay xaqqa u leeyihiin ee ka maqan goboladda bari, gaar ahaana degaamadan Sool, in ay xaqoodda helaan ayaanu ka bilaabaynaa. Waayo ummadda caddaalad ayaa deeqda”.
Dhinaca kale Eng. Faysal, ayaa khudbad u jeediyay boqolaal dadweyne ah oo ku soo dhaweeyay degmada Oog ee gobolka Sool ayaa uga mahad celiyay bulshada degaankaasi sida wanaagsan ee ay u soo dhaweeyeen. Waxaanu sheegay in xisbiga UCID uu doonayo haddii uu talada dalka ku guulaysto in uu ka shaqeeyo midnimadda ummadda iyo la dagaalanka qabyaaladda, isagoo arrintaasi ka dhabaynaya uu noqday xisbigii ugu horeeyay oo murrashaxiisa madaxweyne ku-xigeenka ka dhiga nin ka soo jeeda Sool.
Murrashax Faysal, oo la hadlayay dadweynihii Oog ku soo dhaweeyay waxa uu yidhi “Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin reer Oog, sida wanaagsan ee aad noo soo dhawayseen. Waad og tihiin oo waanagii dalka midaynay, ee aanu Somaliland iyo Khaatumo midaynay, oo waa kaa maanta Cali Khaliif uu Caynaba hurdo, waa taa aanu musharaxii madaxweyne ku-xigeenka reer Sool ka dhignay, Somaliland sidaas ayaanu u midaynay. Waxaynu doonaynaa in aynu midnimadda ilaalino, oo aan ka ilaalino wax alaale iyo wixii midnimadda waxyeelaya, oo ay ugu horayso qabyaaladu.
Waad og tihiin labadda nin ee maanta madaxtinimadda u ordayaa waa Muuse Biixi iyo C/raxmaan Cirro. Horta C/raxmaan Cirro isagu xagaa iyo Xamar ayuu u jeedaa oo waad og tihiin. Ninka la yidhaahdo Muuse Biixi, isna wuxuu inagu sameeyay waxa la yidhaahdo Jeegaan, dalkeenuna Jeegaan uma baahna Garxajisiyana looma baahna, ee waxaa loo baahan yahay muslinnimo, walaalnimo iyo midnimo. Kulmiye, waxaa loo yaqaanaa xisbiga abaarta, sicir-bararka iyo qabyaalada. Waxa kaloo loo yaqaanaa Kulmiye xisbiga Laankuruuser-ka, oo wadda Landcruser ayay fuushan yihiin”.
Murrashaxa UCID waxa uu sheegay in haddii la doorta si uu ummadda uga saaro qabyaalada iyo kala qaybsanaanta in uu dalka ku xukumi doonno diinta Islaamka iyo sunaha rasuulka (SCW), isla markaana aanay cidnaba taasi uga fasax qaadanaynin. “Walaalayaal, anigu waxaan idiin wadaa oo ILLAAHAY (SWT) iiga magan yahay, cadaalad iyo kitaabkiisa iyo sunadda rasuulka (SCW). Kitaabka ILLAAHAY ayaynu qaadanaynaa, cidnaba uga baqi mayno. Kitaabka ayay cadaaladu ku jirtaa, isaga ayay qabyaaladu inagaga baxaysaa, isaga ayay gaajadu inagaga baxaysaa, kitaabka ayay raxmadu inoogu soo degaysaa. caruurtaa yar yar ee soo kacayaa mustaqbal ayay u baahan yihiin, uma baahna afar wasiirr oo reerkoodda ah in la magacaabo, iskuulo ayay u baahan yihiin, caafimaad ayay u baahan yihiin, waddooyin ayay u baahan yihiin, biyo nadiif ah ayay u baahan yihiin”.
Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa carabka ku dhuftay in xisbigooda ay ka go’an tahay hadiiba uu xukunka ku guulaysto in uu ictiraaf u keeno wadanka iyo in da’yarta mustaqbal loo sameeyo, isla markaana qof kastoo reer Somaliland ahi uu hello biyo nadiif ah.
Wuxuu sheegay in ay wax ka qabanayaan arrimaha caafimaadka bulshadda gaar ahaana hooyadda iyo dhalaanka, ayna doonayaan in meel walaba laga hirgeliyo cusbitaallo. “Anaga ictiraaf ayaanu keenaynaa, haddii aanu taladda wadanka ku guulaysano. Waxaanu jecel nahay in aanu caruurteena mustaqbal u samayno, waxaanu doonaynaa in qof kastoo reer Somaliland ahi uu hello biyo nadiif ah.
Maalin dhawayd oo aan Baligubadle soo maray, waxaan arkay caruurteenii yar yarayd ee oo biyaha ka cabaysa meello wasakh ah, taasina waa mid damiir xumo inagu ah umadeena oo dhan. Meel kastaba cusbitaal ayaanu ka samaynaynaa. Hooyadda la soo fool eryayo ee Ceerigaabo laga soo Fool eryayo, ee hawd laga soo fool eryayo, waa in ay meesheedda ku dhashaa” ayuu yidhi Murrashaxa madaxweynaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID.